ukukhiqizwa futhi ukuhweba inqubo Okwamanje ekhona ngeke ikwazi ukukwenza ngaphandle enjalo into ebalulekile njengoba izimpahla. I Logistics lenhlangano umsebenzi walo ingenye izimo lenhlangano efanele ukuhamba yokusungula, izimpahla ezivela umkhiqizi umthengi.
Izinhlobo ezitolo ezisebenza ngezimo esiphila kuzo, ukuvumela izikhungo ezinjengalezi ukuhlangabezana nezidingo ezahlukene kakhulu iqhaza ekukhiqizeni futhi ukuhweba. Kuye uhlobo, lapho agcine, ke wenza imisebenzi ethile.
Ukuze sikwazi ukuhlela ukuhamba kwezimpahla kusukela inkampani kumthengi, Logistics kumelwe sicabangele izici izakhiwo ethulwa. Zakha izimo ezahlukene yokugcina izimpahla kanye impahla amasheya. Ngakho-ke, izici hlobo isitoreji ngamunye kumelwe liqondwe futhi kubonelelwe umsebenzi wabo wonke logistician.
Ngaphambi sibheka izinhlobo ezinkulu emafektri, kufanele yokuqonda lokho okushiwo yinkulumo kule yunithi kwesakhiwo. Isikhala sokulondoloza eziningi imisebenzi. I-Warehouse engu ngokuthi isakhiwo, indawo noma eziyinkimbinkimbi zezakhiwo, okuyinto ezisebenza ukugcina amagugu ahlukahlukene lezimpahla. Ezindaweni ezinjalo zanqwabelana ethile yokusungula, izimpahla esiphelele. Lokhu kukuvumela ukuba asabele nezimo ekushintshashintsheni kwaneliswe isidingo emakethe izimpahla. Kulokhu, kuba nokwenzeka ukuvumelanisa ukuthi lingakanani ijubane lokuya kwempahla impahla ngemijikelezo kwezobuchwepheshe abakhiqizi futhi izinqubo kwezidingo kanye ukudayiswa kwemikhiqizo isiqedile.
Zonke izinhlobo ezinkulu emafektri kungagcini zendawo ethile, okuyinto ivikelwe izinhlangano ezifanele. Ngaphakathi izakhiwo zifanelekile ngokwezinhloso izimo USB.
Ngaphezu isitoreji lezimpahla amanani emelelwa iyunithi kwesakhiwo bakwazi ukucubungula imikhiqizo olufakiwe lapha, ukuze kulondolozwe izinga layo. Abesekayo ishede siyamanisa wathola imithwalo ivolumu, isikhathi kanye ububanzi.
Izinhlobo emafektri, izakhiwo kanye izakhiwo izindawo zinezikhathi isakhiwo esithile. Lungase luhlanganise izakhi eziyisisekelo ezimbalwa. Okokuqala lapha oyakhayo yokugcina, kanye endaweni ezungezile.
esitolo Inkonde ngayinye ifakwe umshini wokuthumela ukulayisha izinhlelo. Lezi zihlanganisa imishini ekhethekile ezindaweni reception noma Dispatch, kummango. Eziningi zalezi izinto ine ezokuthutha yangaphakathi. Lesi sigaba sihlanganisa ezihlukahlukene imishini agcine, zinhlobo ezincike kuzici zalo. Lokhu kungaba izinqola zokudla, amaloli, escalators, zommbila, nokunye. D.
I timphawu tesakhiwo ishede futhi ihlanganisa izingxenye ukucutshungulwa izimpahla. Ngokwesibonelo, lo mugqa emaphaketheni, emabhokisini isicelo ikhodi ibha yesistimu, kanye ukuhlunga kanye nokulungisa ama-oda. Ukuze ukwazi ukugcina izimpahla ishede kudinga ukusetshenziswa Racks, iziqukathi, ifriji nezinye izinhlelo ezikhethekile ukuze balondoloze izinga edingekayo inventories. Noma yimuphi ishede Ubuye uhlelo ezimali. Kungaba computer nasekunyatheliseni nge-manual. Inketho kuqala ngezimo esiphila kuzo zivamile okuningi.
izimiso of ngezigaba
izakhiwo zesimanje yokugcina izimpahla ingenye ISIZINDA ezibaluleke kakhulu Logistics. Kunezinhlobo ezahlukene kubo. Izinhlobo emafektri zihlukaniswa ngokuvumelana nezici ezihlukahlukene.
On usayizi isikhala isitoreji kungaba ezintweni ezincane kuya izakhiwo ukuthi bahlale ezindaweni ezinkulu. Ukuphakama emakhiyubhi izimpahla isehlane eyodwa storey futhi multi-storey izakhiwo lapho imishini lingenza umthwalo ukuphakama yokubeka-24 m.
Ngu design ishede bangase bathande, nengxenye-ivaliwe (usalelwe ophahleni) avaliwe. Cacisa isitoreji lezinto ezikhona ezivamile futhi ekhethekile sezisungule nemibandela ethile (umswakama, izinga lokushisa, ukukhanyisa).
I imishini ye ISIZINDA enjalo ingase ibe khona ehlukile. Kukhona emafektri lapho esetshenziswa abasebenzi zabasebenzi kuphela mathupha. Ngokuvamile, isitoreji isikhala kancane noma ngomshini ngokugcwele.
Uma izimpahla eseduze ngezindlela ezihlukahlukene zokuxhumana, le nto ibizwa Portside, a ujantshi, ezijulile. Ngesisekelo uhla umehluko ekhethekile, exubile kanye izinto jikelele.
Ngamunye into imelelwa uhlobo wenza imisebenzi emithathu eyisisekelo. Izinhlobo umsebenzi in the ishede zenzelwe ukukhonza okokufaka, zangaphakathi kanye okukhipha umfudlana impahla amagugu. Esigabeni sokuqala, abasebenzi kanye nemishini kukhona amaloli esingalayishwanga, futhi iyoqhubela ukuhlola ikhwalithi yezimpahla kanye nobungako.
notshwala Yangaphakathi kugcinwe ukunyakaza ezanele kwezimpahla in the ishede. Ezikhona ihlelwa, igcwele, egcinwe ngaphansi kwezimo ezifanele, nokunye. D.
Emafektri nge ukugeleza okukhipha kuyehla kube ukulayisha izimpahla ukuthutha. Ngokuqondene nalokhu ovelele ukulayisha zone, ukwamukelwa, isitoreji, ukuhlunga, ukudlulisa, kanye namahhovisi kwabasebenzi, abaphathi.
Ukwahlukanisa emafektri eRussia
Ezweni lethu, thina sisebenzise ngezigaba ekhethekile evumela ukwehlukana ukumelwa bento ku izinhlobo ezinkulu. Industrial Units, izici zabo ukuvumela amaqembu amaningana eyinhloko.
Okwamanje, ngokuvamile ezisetshenziswa ohlelweni we PMC, eye yathuthuka inyunyana izinkampani zasekhaya. Le ndlela efanayo kakhulu emhlabeni isimiso Ukwahlukaniswa emafektri. Nokho, uhlelo "PMC" uyakucabangela ngokwezinga elikhulu nezidingo abathengi kanye abaqashi ukuba impahla yalolu hlobo. Kunakwe ngesikhathi esifanayo imibuzo esemqoka ukuthi kuqala kunazo zonke sinake inhlangano ezimaphakathi zezwe lethu.
Zonke izikhungo yokugcina izimpahla, lahlukaniswa laba amaqembu 4. Bona ziphawulwe izinhlamvu zesiLatini. Lapho ukwabela yokubeka isigaba esithile esekelwe design, indawo, imisebenzi yayo eziyisisekelo futhi ubujamo bento. It ucubungula ezokuthutha yayo izixhumanisi kanye nezinye izinto ezibalulekile lenhlangano, Logistics izindawo.
Isikali: insiza, isitoreji emafektri izinhlobo imikhiqizo, uhla edingekayo acabangele. Uma ukhetha izinto ezifanayo ezimpahleni ezingasuki phansi kuyadingeka ukubala ngokunembile isidingo yenkampani ukusetshenziswa okunengqondo lawo magceke ukuze bathole isitoreji lezimpahla amanani.
Class A ishede
Class A kuhlanganisa lezi zinhlobo emafektri ngesikhathi ibhizinisi noma ukuhweba izinhlangano eziye eyakhelwe high yesimanje kwezokwakha nezimfuneko. Lesi sakhiwo indaba nanye, okuphakama kwawo mkhulu kunezinhliziyo 8 m. Lokhu kuvumela ukusungula ngaphakathi ejwayelekile multi-storey Shelving.
Phansi egumbini akufanele obungefani. Kuyinto bushelelezi kahle futhi ongaphakeme ngomshikisho enamathela. Ngaphakathi ekilasini A Isitoreji inakekelwa lokushisa ecacile. Esangweni imishini ngokudala emoyeni amakhethini.
Kuphoqelekile ukusebenzisa uhlelo lesimanje ukuphepha umlilo izici zokucisha izidleke umlilo powder noma Sprinkler hlobo. Futhi ezikhungweni efanayo efakwe izinhlelo ezintsha zokuphepha, e-CCTV. Kukhona ukuxhumana computer optical fibre hlobo. Lokhu kukuvumela ukubuka isikhala kwangaphakathi kakhulu futhi yangaphandle nokuntula "ezibukweni" lapho kungekho phambi edeskini.
Isango izindawo ukwamukela mpahla kwezimpahla e Class A ishede ezishintshayo izinhlelo baye bevula iminyango, ephakamisa kummango.
Indawo yokungena izikhungo ezinjengalezi kufanele kube ntofontofo. Ngokuvamile, ukuthi akuphi eduze wemigwaqo emikhulu. Lolu hlobo isitoreji izindawo bavamise kucasha kubahwebi ukudayisa imikhiqizo yabo bobabili lwezeMpilo Usizo.
Nokho Kunezindawo eziningana izici lula, musa sizithobe lula izigaba odlule. Ikilasi kuhlanganisa zinhlobo anjalo. Ubukhulu ishede kulesi sigaba kungaba umxhwele. Nokho, lesi sakhiwo multi-storey, okuyinto ikuvumela ukuba uthathe ingxenye ezincane ngokuqhathaniswa Class A.
Ukuphakama lezinto ezinjalo luphakathi 4.5-8 m. Izibuya Smooth, egcwele asphalt noma ukhonkolo. Abanaso anti-friction enamathela. Amazinga egumbini ngesikhathi ebusika awehleli ngezansi +10 ° C.
mpahla zone has a kummango, kukhona zokuphepha kwesistimu futhi umlilo ukuphepha. Amahhovisi kuhlangene ishede. Basebenzisa yesimanje izinhlelo zokuxhumana kanye nezokuxhumana.
Indawo yokungena emafektri esinjalo singeze sibe lula kangaka, kodwa isakhiwo useduze ukukhiqizwa noma idolobha.
Material P no D
Uma ucabangela izinhlobo emafektri, kufanele amakilasi ezifana C no-D Amabhizinisi amaningi kuqashelwe, lena inketho iphila kunazo. Material P ikamelo kushunqe uthuli ukuphakama ophahleni ka 3.5 18 m. Amazinga inakekelwa ezingeni kusukela +8 ukuze +14 ° C ebusika.
Ezokuthutha ingena ukulayisha futhi athula, okuyiwona esangweni njalo igcinwe isikhundla zero. Floor isigubungelo kungaba ukhonkolo, asphalt noma ama-tile.
Class D libhekene nezidingo aphansi. Lokhu kungenziwa unheated engaphansi ndlu noma lendlu yebhanoyi. Kulesi sigaba nazo ziwe izinjongo sezokuvikela.
Kuye isigaba egumbini kunqunywa izindleko ukuthenga noma ukuqasha. Ngakho-ke, inkampani kufanele inake ngezidingo zabo. Uma okungeziwe azidingeki, kungenzeka ukuba makudle ongaphakeme kwekilasi ishede. Kodwa ezimweni eziningi, ngaphandle ukusebenza kwe-Ikilasi into noma B abanakukwazi ukwenza. Izindleko yesondlo kanye ukuqasha asule ngenxa imisebenzi yenhlangano.
Uma ucabangela izinhlobo emafektri, kufanele kuphawulwe ukuthi kukhona zomphakathi siqu izakhiwo zabo zebhizinisi. Esimweni sokuqala, inhlangano Rents igumbi noma ingxenye yayo ngoba izidingo umkhiqizo wabo.
Lokhu kuyadingeka uma inzuzo encane noma ukuthengiswa kwempahla kwesizini. Le nkampani oholela kangcono ukukhokha amasevisi zomnikazi ishede umphakathi kuka ukulondoloza into yayo. Izimfuneko amakamelo isitoreji kulezi amabhizinisi kancane.
usayizi amancane ukumelwa esikiselwayo ingcebo umthengi enze kuwusizo kwezinye izimo. Ngokwesibonelo, lapho inkampani ingena emakethe entsha, lapho ukubikezela kube nzima ke ezicini eziningana, isitoreji sokwabelana kunganciphisa izingozi zezimali wenkampani. Asikho isidingo ukuheha utshalomali olwengeziwe.
Izinkampani akudingeki ukuqasha abasebenzi abaqeqeshiwe ukuze ukufaka, kanye lokufeza yokusungula management. amabhizinisi amaningi ezinkulu zisebenzisa amasevisi ishede yomphakathi. It ikuvumela ukugcina imikhiqizo eduze ngangokunokwenzeka ukuze abathengi, ukunciphisa zokuthutha izindleko.
Nokho, akubona bonke izimo, kungcono ukuqasha inhlangano igumbi. Ngezinye izikhathi ezifanele ukuthenga impahla yabo. Lokhu kubalulekile uma ukuhweba libhekene omningi. Eziningi zalezi izindawo zitholakala iseduze ukukhiqizwa.
Futhi, izinhlobo eziningi ezitolo okudayisa ukusebenzisa lolu uhlelo. Uma ukuqaliswa libhekene yesidakamizwa futhi bagxila iseduze ikhasimende, oholela kangcono ube ishede yabo. Inhlangano uzihlomisa ngendlela efanele.
Ngokuvamile, lokhu ekilasini impahla "A" noma "B". Kube Kwenziwa ezimali nokulawula yokusungula siqu inkampani zokuhweba. Yena iqasha ochwepheshe abafanelekayo, uhlela inqubo yokuhweba (wholesale, okudayisa), nokuthi izinto zazinjani ngesikhathi ukubaluleka amafa eziphathekayo, ezihlinzekwa kumthengi.
izinkampani yezimboni ezinkulu futhi babe emafektri yabo. Agcinwa izinqolobane, lulwimi siphelile kanye nemikhiqizo isiqedile. Uma inzuzo inkampani libhekene omningi, iqukethe ishede ayo ezifanele ezingaphezu kuka ukuqasha kwesisekelo efanayo.
Imihlobo akhona emafektri, kumele kuphetfwe ukuthi kukhethwa luhlobo ezinjalo kufanele bacabangele izici zabo ethize. Lokhu kuzovumela inkampani ukuhlela ngempumelelo isitoreji kanye nokunyakaza yokusungula izinto. Izindleko ubuncane ukugcinwa kanye isitoreji izindawo yesondlo kuzokhuphula kokusebenza, ukwandisa umphumela zezimali. Ngu inqubo yokuhlela izindawo ezifana zithathwa bucayi kakhulu, ikhiqiza ezihlukahlukene izibalo nocwaningo.
Yini wamafutha kusuka bedsores asebenza kakhulu?
I-movie sad kakhulu ngothando e cinema wesimanje